Masaraan Abbaa Jifaar kunuunsaafi eegumsa barbaada
Masaraan Abbaa Jifaar kunuunsaafi eegumsa barbaada Featured
Masaraa Abbaa Jifaar
Masaraan Abbaa Jifaar bara 1870tti mootii Abbaa Jifaariin kan ijaarame ta’uu ragaaleen seenaa ni mul’isu. Masaraan kun waggoota 140 lakkoofsiseyyuu kunuunsaafi eeguumsa barbaachisu argachaa akka hinturre irra deddeebiin himamaa tureera; ammas himamaa jira.
Abbaan Taayitaa Eegumsafi Qorannoo Hambaa masarichaa haaressuuf ogeessa ergee qorannoo taasisaa jiraachuu ibsa dhiyeenya kana kenneen beeksisee ture. Qorannichi erga xummuramee booda iddoowwan diigaman adda baasuun qabiyyeesaa duraa osoo hin gallakkisiin kan haaromfamu ta'uus ibseera.
Obbo Abdulkariim Abbaa Garoo jiraataa Magaalaa Jimmaati. Masaraa Abbaa Jifaar ilaalchisuun Gaazexaa Bariisaatiif ibsa kan kennan yoo ta'u, innis haala ittaanuun dhiyaateera.
Jimmi Sirna Gadaatiin bulaa turte. ALA bara 1742 Abbaa Faaroo Koobii Gaangilaa mootii Jimmaa jalqabaa turan. Isaan booda mootiin Jimma bulchaa turan Abbaa Magaal, Abbaa Raagoo, Abbaa Jifaar tokkoffaa, Abbaa Reebuu, Abbaa Booqaa, Abbaa Gommoliifi Abbaa Jifaari. Amantiin Islaamaa Jimma kan dhufe ALA bara 1830 bara mooticha Abbaa Jifaar tokkoffaati jedhu.
Abbaa Jifaar mootii kan ta'an ALA bara 1875tti. Abbaan Jifaar bulchiinsa gaariifi biyyoota ollaa waliin hariiroo gaarii qabaachuun beekamu. Daldalarrattis xiyyeeffatanii hojjechaa waan turaniif daldaltoota gara Jimmaa dhufan ni affeeru turan. Qulqullinarratti xiyyeeffatanii hojjechaa waan turaniif namoonni hundi mana fincaanii akka qabaatan taasisaas turaniiru.
Boongaan, Wallaggi, Asandaaboon, Gojjam, Bassoo Liiban, Matammaan, Gondar, Sooddoon, Ankoobar, Goreen, Gaambeellaan Mitsiwwaan, Sudaaniifi Zaanzibaar kallattiiwwan daldalaa Jimmaa turan jedhu, Obbo Abdulkariim.
Abbaa Jifaar faranjoota, arabootaafi Hindoota affeeruufi waliin jiraachuudhaan yaadaafi waan muuxannoo irraa qooddataniif teknolojiittis dhiyoo turan. Konkolaataan Jarmanii bitanis waggoota lamaaf daandiirra turee isaan bira gahe. Mucaa isaaniitiifis biskileetii bitanii turan. Masaraasaanii ijaaruufis qorqorroo malee meeshaan biyya alaatii bitame tokkoyyuu hinjiru.
Mismaarri masarichi ittiin ijaarames Jimmumatti omishame. Bishaanis tubboo leemmanaatiin fageenya kiiloo meetira sadiirraa fichisiisuun itti fayyadamaa turan jedhu.
Masaraa seena qabeessa kanaaf eegumsiifi kunuunsi barbaachisu taasifamaafii hinjiru. Masarichi hambaa dhalootaa dhalootatti darbu waan ta'eef kunuunfamuu qaba. Kunuunsuu yeroo jennu babbareechuu (miidhagsuu) jechuu miti. Masaricha babbareechuuf jecha halluun dibameera. Kun sirrii miti. Meeshaaleen Masjiida Abbaa Jifaar keessatti xuubii (suphee) irraa hojjetaman kaasanii simintoodhaan hojjetamaniiru; kunis sirrii mitii, jedhu.
Masaraan kun yeroo ammaa diigamaafi rirmaan nyaatamaa waan jiruuf kuniinsiifi eegumsi barbaachisu taasifamuufii qaba kan jedhan Obbo Abdulkariim, masaraa kana eeguufi kunuunsuun seenaan hambaadhaan deggeramee dhalootaa dhalootatti akka darbuuf kan gargaaru ta'uus dubbatu.
Kopheen Abbaa Jifaar agarsiisaaf Finfinneetti geeffamee badeera kan jedhan Obbo Abdulkariim, sanadootaafi xalayaawwansaaniis jalteenya (footoo koppii) isaaniis golambaaf kenneera jedhu. “Uffannaan Abbaa jifaaris na bira jira. Hambaalee kunneen eeguufi kunuunfamee dhalootaa dhalootatti darbuu qaba. Eegumsiifi kunuunsi Masaraa Abbaa Jifaaris xiyyeeffannaa olaanaa argachuu qaba” jedhu.
Gama biraatiin, akka Obbo Abdulkariim jedhanitti, Jimmi jaalalaafi keessummaa simachuun beekamti. Jaalalli bu'uura waa hundaati. Dawaalee biqiloota addaddaa baala irraa hojjetamaniinis beekamtuudha. Biqiloota dawaalee 40 caalu barreeffatanii qabu. Jimmatti abbaan warraa haadha warraasaa mararsiifatee waama.
Haasaa abbaan warraa haadha warraa waliin taasisu keessaa %30 jaalala ibsa. Fuula guduunfuun ykn nyaara guuruun dulluma ofitti harkisuu waan ta'eef aadaan jaalalaafi gammachuun waliin jiraachuu cimee ittifufuu qaba.
Walumaagalatti, magaalaan Jimmaa utuu qaroominaafi jijjiirama dur agarsiisaa turteen ittifuftee har'a eessa akka geessu tilmaamuun nama hindhibu. "Kan darbemoo kan dhufutu caala jennaan gowwaan kan darbetu caala" jedhe. Misooma, guddinaafi jijjiirama magaalattii saffisiisuus ta'e hambaalee jimmaa eeguufi kunuunsuun dhimma yeroon kennamuuf ta'uu hinqabu.
Torban kana/This_Week 4921
Guyyaa mara/All_Days 1642516